बुधबार शेयर बजार १८.८१ अंक उकालो लागेर करीब ६ अर्बको कारोबार | News Polar
बुधबार शेयर बजार १८.८१ अंक उकालो लागेर करीब ६ अर्बको कारोबार
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक हिस्सा
काठमाडौं । बुधबार शेयर बजार १८.८१ अंकले बढेर २ हजार २८६ दशमलव ५४ विन्दुमा बजार बन्द भएको हो । यस दिन २ हजार २७९ दशमलव शून्य ४ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार २९६ विन्दुसम्म पुगेको थियो । यो दिन कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १ दशमलव ९७ अंक बढेर ४३५ दशमलव २५ विन्दुमा पुगेको छ । बुधबार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ ।
बुधबार रू. ५ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख ८९ हजार बराबरको १ करोड ३२ लाख ८९ हजार ८४९ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । बुधबार उक्त रकम बराबरको कारोबार २०७ ओटा कम्पनीको ५० हजार ९५० पटकको व्यापार भएको छ ।
दोहोरो अंकले बढेको बजारमा ४६ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यी मध्य मल्टिपर्पस फिनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ४ दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १६२ कायम भएको छ । बुधबार होटल समूहको शून्य दशमलव २८ प्रतिशत र बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ । यस दिन वित्त समूह र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । वित्त समूहको परिसूचक ४ दशमलव ७५ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ४ दशमलव २३ प्रतिशत बढेको हो ।
त्यस्तै यो दिन लघुवित्तको २ दशमलव ७४ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ७२ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव ३१ प्रतिशत , जीवन बीमाको १ दशमलव १७ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत र व्यापारिकको शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत, फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ९७ प्रतिशत, इन्फिनिटी लघुवित्तको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत, नारायणी डेभलपमेण्टको ९ दशमलव ८९ प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको ९ दशमलव ८८ प्रतिशत, प्रभु लाइफको ९ दशमलव ७२ प्रतिशत, गणपति माइक्रोफाइनान्सको ९ दशमलव ५३ प्रतिशत, समृद्धि फाइनान्सको ९ दशमलव ५२ प्रतिशत र एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको ९ दशमलव २१ प्रतिशतले शेयरमूल्य बढेको हो ।
यो दिन कुल कारोबार रकममा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक हिस्सा रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. २६ करोड ५५ लाख २४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य पनि प्रतिकित्ता रू. १० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार २६३ पुगेको छ ।
दास्रोमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २० करोड ७२ लाख ५५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यस कम्पनीको शेयरमूल्य पनि प्रतिकित्ता रू. १५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ५५१ कायम भएको छ । यस दिन १० ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले र अन्यको ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
# बुधबार शेयर बजार # सेन्सेटिभ इन्डेक्स # नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी # शेयरमूल्य # नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी
प्रकाशित : पुष २९, २०७७, १६:४३:२६
साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक ३१.८७ अंकले उकालो
साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार १९.७८ अंकले बढेर २३६२.५४ विन्दुमा
बुधबार शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन, १५.८७ अंकले बढ्यो नेप्से
बुधबार कारोबारको पहिलो घण्टामा नेप्से परिसूचक १९.३७ अंकले उकालो